Home /Blog/Xoghayaha Arrimaha Dibedda Britain oo Booqday Soomaaliya
Xogayaha Arrimaha Dibadda ee Midowga Boqortooyada (United Kingdom) Boris Johnson ayaa safar aan horey loo sheegin qorshihiisa ku yimid magaalada Muqdisho. Safarkan ayaa imaanaya maalin kadib markii 13 hay’adaha gargarka ee UK ay ku dhawaaqeen in gargaar degdeg ah lala gaaro Afrikada Bari.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa Xogyaha Arrimaha dibadda ku soo dhaweeyey aqalka Madaxtooyada halkaas oo ay ku wada qaateen kulan gaar ah.
Waxaa lagu wadaa in Muqdisho isla maanta uu ka dhaco shir qaylo-dhaan loogu dirayo caalamka in laga soo gaaro Soomaaliya, waxaana ka qayb-qaadanaya qaar kamid ah madaxda Dowlad goboleedyada ay abaaaraha ba’an ka jiraan.
Boris Johnson ayaa Muqdisho uga dhawaaqaya sida dowladiisa uga qayb-qaadanayso gurmadka loo samaynaayo dadka abaaruhu saameeyeen. Maalintii shalay ayaa Dowladda Ingriisku ku dhawaaqdey 5milyan oo lacagta giniga ah oo loogu deeqay dadka abaaruhu saameeyeen.
Qaramada Midoobey ayaa Muqdisho ka samaysey xarunta isku-xirka gurmadka abaaraha, markii u horeysey waxaana lagu ururiyaan dhamaan xogta la xiriirta abaarta iyo xaalkeeda.